Ayado halkaasoo eego horumarka tiknoolijiyada ka dhigay wax badan oo lagu fekeri karin suurtagal ah, hadda waa suurto gal inay ku raaxaystaan ​​heeso iyo filimaan guriga, iyadoo la bixin iyaga u. Haa, music iyo filim ku caashaqa oo maalmahan yihiin kuwo aad u nasiib badan tan iyo markii ay kala soo bixi kartaa filimada iyo raad aan xad lahayn oo ku saabsan mid ka mid ah qalabka ay iyada oo loo marayo ka mid ah daadkii. Kaqabto, daadkii u waxyaalo badan oo kale sida cayaaraha, videos, odayo iyo bandhigyada TV sidoo kale diyaar u yihiin inay ku raaxaystaan ​​lacag la'aan ah. Haddii aad doonayso inaad fahamto habka ay u soo bixi Softwares torrent aad PC / Mac, telefoon ama kiniin ah, ka dibna waxaad u tegi kartaa iyada oo macluumaadka soo socda la siiyey.
Qeybta 1: Download software torrent u PC / Mac
Qeybta 2: Download Torrent app for Android, iPhone oo kiniin ah
Qeybta 3: Torrent kale - Music iyo movie downloadder
Haddii aad PC ama Mac user iyo rabto in aad kala soo bixi software durdurkii on qalab aad, ka dibna aad ku faraxsan yahay in la ogaado in nidaamka waa mid aad u fudud doonaa. Movies, music, bandhigyada TV oo kulan la wanaagsan ee ku riyaaqay kartaa kumbiyuutarada ama Mac sababtuna waxaa weeye baaxadda weyn oo shaashadda, tayada audio wanaagsan iyo fududaato in la isticmaalo. Waxaa intaa dheer, markii aad leedahay durdurkii soo bixi on qalab aad, aad mar walba oo ku raaxaysan karaan, sababtoo ah meel kasta oo ka mid ah qalabka karo. Kuwa soo socda waa tallaabooyinka ay kaa caawin doontaa in aad ka soo dejisan software torrent aad PC ama Mac qalab.
Tallaabada 1 Tallaabada ugu horreysa waa in ay ogaadaan magacyada reer binu Softwares kala duwan torrent la heli karo in aad u download. Qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee dhufto ee sida waxaa ka mid ah Bittorrent, uTorrent, Vuze iyo qaar badan. Dhammaan dhufto, kuwaas oo ku haboon filimada duuban, kuwan raadkaygay music, kulan, muujinayo TV iyo dokumantaaryada. Waxaan halkan isticmaalaya Vuze sida tusaale.
Tallaabada 2 Bogga guriga, waxaa laguu soo bandhigi doonaa fursadaha kala duwan ee dajinta. Out of fursadahaasi, ka heli mid ka mid ah taas oo ku haboon aad version OS aad Windows / Mac OS ama Linux. Hubi version software Torrent waa ugu dambeeyay updated on.
Haddii aad rabto in aad ku raaxaysan filim, kulan ama daadkii music aad telefoon ama miiska oo ay ku jiraan qalabka Android ama iPhone, markaas xitaa ay dhacdo in, geeddi-socodka lagu soo degsado software waa laablaab laheyn. Xitaa telefoonada iyo kiniiniyada waa dhufto fiican u riyaaqayaa filimada, dhagaysiga muusigga, ciyaaraha lagu ciyaaro iyo daawashada muujinaya TV. Waxay ka badan la qaadi karo, fudud si ay u isticmaalaan iyo kaa caawiyaan in aad qaadato warbaahinta aad meel kastoo aad tagtidba yihiin. Qalabka waxa kale oo ay bixiyaan waayo-aragnimo fiican oo shakhsi ah sida marka la barbar dhigo kale devices.If aad dooneyso in aad kala soo bixi torrent u Android, iPhone ama kiniin ah, ka dibna marka hore waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo app ah oo la mid ah. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo raacaya taallaabooyinka siiyo:
Tallaabada 1 Tallaabada ugu horreysa waa in ay tagaan dukaanka app ee qalab aad ka, eegin waxaa ka mid ah isagoo ah phone / kiniin Android ama iPad / iPhone oo ka dibna ku qor magaca software download in aad dooneyso in aad kala soo bixi ka. Waxaan isticmaaleynaa Vuze sida tusaale e
Tallaabada 2 Marka aad sidaas samayso, waxaad la soo bandhigi doonaa liiska oo ka mid ah fursadaha dhici dhow si aad u raadinta. Sida caadiga ah, ikhtiyaarka koowaad waa in app-ka rasmiga ah in aad raadinayso.
Tallaabada 3 Dooro app rasmiga ah ee download software durdurkii guji dajiyo. App ayaa bilaabi doonaan in ay soo bixi ka dib markii aad weydiinaya Lugood ama Android password dukaanka app.
Tallaabada 4 Marka lagu rakibay, aad furi karaa telefoonka ama kiniin ah, oo markaas waa in loo siiyaa biraawsarkaaga in la sii wado geedi socodka ee degsado file durdurkii.
Qeybta 3: Torrent kale - Music iyo movie downloadder - TunesGo
> Resource > Music > Download Software Torrent u Devices